नेपाल आज | टाटाको नेक्सन क्राज बजारमा
टाटाको नेक्सन क्राज बजारमा
काठमाडौं । टाटा मोर्टसको नेपाल स्थित आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडले नयाँ गाडी नेक्सन क्राज बजारमा विक्रि वितरण आरम्भ गरेको छ । टाटा नेक्सनको व्यवसायिक सफलताको उत्सव मनाउँदै टाटा मोटर्सद्वारा नेक्सन क्राज अाजबाट बजारमा ल्याएको हो ।
“नेक्सनले नेपाली बजारमा सर्वाधिक विक्रीहुने COMPACT SUV को रुपमा आफ्नो वेग्लै पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ । सक्रिय र साहासिक जीवनशैली रुचाउने नेपाली ग्राहकको आवश्यक्ता र मागलाई सम्बोधन गर्दै नेक्सनको अर्को आकर्षक संस्करण ‘नेक्सन क्राज’ बजारमा ल्याइएको टाटा मोर्टसको प्यासेन्जर भेइकल यूनिट सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय व्यापारका प्रमुख सुजन रोय बताए ।
क्राजको विशेषताको कुरा गर्नु पर्दा यो गाडी मल्टिड्राइभ मोड रही शहरको व्यस्त सडक देखि राजमार्गसम्म सरल र रोमाञ्चक ढङ्गले गुड्न सक्ने क्षमता रहेको छ । २०९ मिलि मिटरको उतकृष्ट ग्राउण्ड क्लियरेन्सले नेक्सन क्राजलाई अरुभन्दा बढि सुरक्षित र आरामदायी बनाएको छ ।
चार स्पिकरको इन्फोटेन्मेन्ट, अटोमेटिक, क्लाइमेट कन्ट्रोल, रिभर्स पार्ककिङ्ग, सेन्सर जस्ता अन्य उच्च स्तरको प्राविधिक एस्.यू.भि. मोडेलमा पाइन्छ ।
कालो र हरियो रङ्गको बेजोड समिश्रण भएको नेक्सन क्राज १२०० पेट्राेल र १५०० डिजेल सिसि इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध छ । मङ्सिर १ गते बाट नेक्सन क्राज , क्राज र क्राज प्लस गरी दुई वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ । यस गाडीको मूल्य यस प्रकारको रहेको छ । डिजेलका लागि रु ४३,८५,००० र पेट्रोलका लागि रु ३९,९५,००० मुल्यमा उपलब्ध ।
1. Tromso Black Neo- green रङ्गको अपूर्व संगम । Automotive design क्षेत्रमा एक विल्कुलै नयाँ क्रान्ति ।
2. Sporty Sonic- Silver रङ्गको dual-tone roof
3. 110 PS शक्ति र6speed manual गियर transmission प्रणली भएकाले उत्कृष्ट कार्यक्षमता ।
4. Global NCAP को परिक्षणद्धारा सबैभन्दा सुरक्षित SUV प्रमाणित । Global Ncap को crash test मा सुरक्षाको लागि4star उपाधि पाउन सफल ।
5. ECO, CITY र SPORT को मल्टिड्राइभ मोड भएको ।
6. 209 मिलिमिटरको उतकृष्ट ग्राउण्ड क्लियरेन्स
टाटा मोटर्स बारे
टाटा मोटर्स (वार्षिक) ४५ अर्ब डलरको कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो जसले कार, युटिलिटी गाडीहरु, बस, ट्रक अनि सुरक्षामा प्रयोग हुने गाडीहरु उत्पादन गर्छ । यो भारतको सवैभन्दा ठूलो अटोमोवाइल कम्पनी हो र १०० अर्ब डलरको कारोवार रहेको टाटा गु्रपको एउटा हाँगा हो । १०९ सहायक कम्पनीहरु मार्फत टाटा मोटर्स वेलायत, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र इन्डोनेसियामा सञ्चालित छ ।
बेलायतको स्थापित ज्यागुअर ल्याण्ड रोभर पनि टाटा मोटर्स अन्तरगत उत्पादन हुन्छ । अनि यसले दक्षिण कोरियामा टाटा डेउ नामक कार उत्पादन गर्छ । कम्पनीको भारतमा फियाटसँग संयुक्त औद्योगिक भेन्चर लगानी पनि रहेको छ । टाटा मोटर्स (बस, ट्रक जस्ता) कमर्सियल गाडीमा भारतीय बजारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । ब्राण्डको मुल मन्त्र नै Connecting Aspirations रहेको यस कम्पनीले आफ्ना कार्यहरु ग्राहक र बजारको मागमा केन्द्रित रहि नौलो र दिगो प्रविधिको विकास गर्दै आएको छ ।
प्यासेन्जर गाडीको बिक्रीमा पनि टाटा अगाडि नै रहेको छ । यसका ९० लाख गाडीहरु भारतीय सडकमा गुडिरहेका छन् । कम्पनीले दिगो र उपयुक्त खालको अटोमोवाइल प्रविधिको आविष्कारमा ध्यान दिदै आएको छ । यसको अनुसन्धान र विकास केन्द्रहरु भारत, बेलायत, इटाली र दक्षिण कोरियामा रहेका छन् । अर्को जमानाका ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर टाटा मोटर्स नयाँ खालका उत्पादन ल्याउन कटिवद्ध भएर लागको छ । टाटाका कार, बस र ट्रकहरु, युरोप, अफ्रिका, मध्य एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वि एसिया, दक्षिण अमेरिका, अष्ट्रेलिया, रुस र पूर्वी यूरोपका देशहरुमा विक्री वितरण हुन्छ ।
सिप्रदी अटोमोटिभ र सम्वन्धित व्यवसायमा काम गर्ने नेपालको सवैभन्दा ठूला र सम्मानित ब्राण्डहरु मध्ये एक हो । ३४ वर्षदेखि कार्यरत सिप्रदीको वार्षिक कारोवार ३५ करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ र यसको कारोवार तिव्रगतिमा बढ्दै गएको छ । सिप्रदी अटोमोवाइल, उर्जा, लुव्रिकेन्ट, वित्तीय सेवा र उपकरणको व्यवसायमा आवद्ध रहेको छ । यसका ७५० जना कर्मचारी छन् अनि ६५० जना सहयोगी कर्मचारी छन् ।
उनीहरु उत्कृष्ट बस्तु र सेवा पु¥याउने एउटै उद्धेश्यका साथ काम गरिरहेका छन् जसले सिप्रदीको ब्राण्ड भ्यालु बढेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि सन् १९८२ देखि नेपालमा टाटा मोटर्सका आधिकारिक विक्रेता रहँदै आएको छ । यो आइएसओ ९००१–२००८ प्राप्त कम्पनी हो । यसको नेपालमा सवैभन्दा धेरै विक्री तथा सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् । देशभरि टाटा मोटर्सका कमर्सियल गाडीमा समर्पित २४ विक्री कार्यालय, २५ सेवा केन्द्रहरु र ३०० स्पियर पार्टस आउटलेट रहेका छन् । सिप्रदी प्रा.लि, नेपालका लागि Exide Batteries, Mak Lubricants र Michelin tyres को पनि आधिकारिक वितरक हो ।
बजारमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड नयाँ गाडी नेक्सन क्राज